Qaboojiyaha Hawada la qaadan karo
Solar DC Qaboojiyaha Hawada
Aqoon isweydaarsi Mashaariic Hawo qabow
Mashaariicda Hawo Qaboojiyaha
XK-75C Window cidiyaha hawo uumi hawo qaboojiye
XK-05SY Qaboojiyaha hawada ee DC qorraxda laga qaadan karo
XK-15SY qaboojiyaha hawada uumi baxa biyaha dibedda ah
XK-05SY qolka yar Portable hawo qabow w ...
XK-18/23 / 25S aqoon isweydaarsiga warshadaha kuleylka hawada uumi baxa ...
XK-18/23 / 25S aqoon isweydaarsi uumi warshadeed uumi saarid hawo soosaara Shiinaha
XK-18/23 / 25S aqoon isweydaarsiga meeldhexaadka ah uumiyaha hawada uumi-baxa ayaa ah midka ugu caansan ee qaboojiyaha hawada. Waxaan ugu tala galnay awoodo kala duwan 1.1kw, 1.3kw, 1.5kw si loo daboolo baahida kala duwan. Oo waxaa jira kor, hoos, dheecaan hawo dhinaca ah oo si habboon loogu dhejin karo derbiga, saqafka iyo meelaha kale.
XK-20S meherad qaboojiye uumiyaha warshadeysan biyo-engejiye
Qaboojiyaha hawada uumi baxa biyaha ee warshadda XK-20S ayaa ah midka ugu caansan qaboojiyaha hawo-mareenka. Oo waxaa jira kor, hoos, dheecaan hawo dhinac ah oo si haboon loogu dhejin karo derbiga, saqafka iyo meelaha kale.Waxaa lagu dabaqi karaa qaboojinta warshad 60-80m2 ah oo ku taal aag qoyan iyo warshad 150-200m2 ...
XK-25H nidaamka qaboojinta marin biyoodka cusub ee hawada
XK-25H nidaamka qaboojiyaha marinka hawada ee warshadaha qaboojiyaha cusub ayaa ah qaboojiyaha hawada ee warshadaha cusub ee ay soo saartay XIKOO. waxaa jira kor, hoos, dheecaan hawo dhinac ah oo si haboon ugu rakibaysa derbiga, saqafka iyo meelaha kale.Tababarkan cusub oo leh suuf qaboojin sare leh, uumi bax wanaagsan iyo qaboojinta. A ...
XK-30S hawo-qaboojiye hawo qaboojiye weyn oo hawo qaboojiye ah
XK-30S hawo-qaboojiye hawo-warshadeed oo waawayn oo hawo waa hawo-warshadeed caan ah. Waa awood hoose 3kw oo leh hawo weyn 30000m3 / h, iyo gaarsiinta hawada 40-50m oo xariiqa tuubada ah. Lagu dabaqi karo qaboojinta aagga 200-250m2 oo leh hal gabal. XK-30S hawo-qaboojiye hawo-warshadeed oo weyn oo hawo qaboojiye leh oo ku qalabeysan warshad ...
XK-30/35/45 / 50S ahama hawo weyn oo warshad weyn leh
XK-30/35/45 / ahama weyn qaboojiyaha hawada warshadaha weyn sentrifugal loogu talagalay aqoon isweydaarsi weyn. Iyada oo hawo weyn leh iyo cadaadis hawo, masaafada gaarsiinta hawadu aad bey u fog tahay 100-200meters. Waxaa loogu talagalay inay ahaato suunka geerida marawaxadaha oo leh qolof bir adag oo adkeysi leh. Erey sare oo wax ku ool ah ...
XK-75C Window cidiyaha hawo uumiyaha hawo qaboojiyaha waa mid caan ah biyo qaboojiye uumi qaboojiyaha, waxay hoos u dhigtaa heerkulka iyada oo loo marayo uumiga biyaha.Waxay leedahay tuubbo hawo iyo hawo faafiyaha ah, waxaa lagu rakibi karaa gidaarka banaanka si loo keeno hawo cusub oo qabow gudaha. Muuqaal Fiican PP Waxyaabaha jirka caag ah ...
XK-13 / 15SY qaboojiye hawo uumi-bixiye ah oo dibadda ah ayaa ah nooc caan ah oo ganacsi meherad qaboojiyaha la qaadan karo ah, waxay hoos u dhigi kartaa heerkulka iyada oo loo marayo uumi-biyoodka iyadoo adeegsi hooseeyo. Waxay leedahay qaababka qaarkood sida hoos ku xusan: Muuqaalka Wanaagsan ee Qalabka PP Qalabka jirka, Anti-UV, Anti-gabowga, cimriga dheer ee ...
XK-18SYA Portable warshad qaboojiyaha hawada qaboojiyaha aqoon isweydaarsiga
XIKOO loogu talagalay saldhigga XK-18SYA ee qaboojiyaha hawada warshadaha. Ku cusbooneysii qaboojiyaha hawada warshadaha 350L taangiga weyn ee biyaha, giraangiraha, dhuumaha hawada xusulka iyo fidiyaha hawada si ay u noqdaan XK-18SYA. Marka Way istaagi kartaa oo la qaadi karaa dabaqa, rakibid la'aan. LCD + kontoroolka fog, waxaa jira 12 xawaare oo kala duwan oo lagu beddelayo, in ka badan l ...
XK-06SY uumi baxa guryaha la qaadan karo oo qaboojiye soosaarida Shiinaha
XK-06SY uumi baxa qaboojiyaha hawada la qaadan karo ee Shiinaha soo saarista XK-06SY qaboojiyaha hawada ee la qaadi karo ayaa ah mid caan ku ah guriga, xafiiska, qolka. dukaanka iyo meelo kale. Qaar badan oo qalabka wax qeybiya waxay u qaataan qaabkan ganacsigooda, waxaana jira amaan badan oo loogu talagalay XK-06SY kuwa isticmaala dhamaadka. XK-06SY ...
XK-18/23 / ST 12cm cusub qaboojiye suuf warshad meeldhexaadka ah
Qaboojiye hawleedka warshadaha leh 12cm faashad qaboojiye waa cilmi baaris madax-bannaan oo ay soo saarto XIKOO sannadka 2020. Qaabaynteena cirbadeynta gaarka ah iyo patentkeena muuqaalka faaiidada iyo muuqaalka Waxay ka kooban tahay dheecaan kor u kaca, dheecaan hoos u dhaca iyo dheecaan dhinaca ah, waxay la kulmi kartaa baahi kala duwan oo ah meesha lagu rakibayo. The ...
Solar waa tamar cusub oo saaxiibtinimo deegaanka ah, XIKOO waxay raacdaa hal-abuurnimada tikniyoolajiyadeed iyo keydinta tamarta iyo ilaalinta deegaanka, Soosaarisay soona saartay XK-05SY Qoraxda la qaadan karo ee 24v DC. waana qaboojiyaha hawada uumi baxa la qaadan karo, oo ku habboon in la dhaqaajiyo oo biyo lagu daro. Muuqaalka Wanaagsan ee ABS ...
XK-75 / 90SY lamadegaanka uumi bixiyaha hawo qaboojiye hawo siiye hawo
XK-75 / 90SY saxaraha uumiga hawo hawo qaboojiyaha waa hal nooc oo heer sare ah oo hawo qaboojiye hawo weyn leh. waxay leedahay buuga gacanta iyo otomaatiga laba siyaabood oo biyo loogu daro haanta weyn ee 120L. Qaybaha tayada sida hoos ku xusan: New pp Waxyaabaha jirka XK-75 / 90SY waxay leeyihiin PP Waxyaabo cusub oo jirka caag ah, Anti-UV, Anti-gabowga, waqtiga nolosha dheer. kuleyl wanaagsan ...